LGD-4033 (VK5211) Onye na-emepụta Ligandrol ntụ ntụ & ụlọ ọrụ
/ ngwaahịa / SARMS / LGD-4033 (VK5211) Ligandrol ntụ ntụ
AASraw nwere njikọ na mmepụta site na gram ka usoro nchịkọta nke LGD-4033 (VK5211) Ligandrol ntụ ntụ (1165910-22-4), n'okpuru usoro CGMP na usoro njikwa mmachi.
LGD-4033 (VK5211) Ligandrol ntụ ntụ bụ otu n'ime ndị ọhụrụ SARMS na-apụta ma na a ìgwè nke androgen ihe nnabata (AR) ligands na-anụ ahụ nhọrọ, reated iji gwọọ muscle imefusị jikọtara nnukwu na-adịghị ala ala ọrịa, nká muscle ọnwụ na cancer.
(VK5211 ntụ ntụ) LGD-4033 ntụ ntụ, Ligandrol powdere video
(VK5211 ntụ ntụ) LGD-4033 ntụ ntụ, Ligandrol powdere isi agwa
Molekụla Formula: C14H12F6N2O
Ọbara arọ: 338.24
Melt Point: 105 - 106 Celsius C
agba: Gbanyụọ ọcha Crystal ntụ ntụ
(VK5211 ntụ ntụ) LGD-4033 ntụ ntụ, Ligandrol powdere ojiji na steroid cycles
(VK5211 ntụ ntụ) LGD-4033 ntụ ntụ, Ligandrol powedre Usage
5-10mg ụbọchị maka 8weeks nwere ike ikwu. Nri protein bara ọgaranya dị oke mkpa dị ka ihe oriri caloric dị elu ma ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịmịkọrọ 10 pound ma ọ bụ karịa. Mana ọ bụghị karịa 22mg n'ụbọchị.
Ịdọ aka ná ntị (VK5211 ntụ ntụ) LGD-4033 ntụ ntụ, Ligandrol ntụ ntụ
LGD-4033 / VK5211, Ligandrol (CAS 1165910-22-4) kachasị mma maka recomping. Ọtụtụ ndị ọkachamara ekwuola na ha ahụwo mmụba dị na ụda ozu na oke abụba. Iji ya na ndị ọzọ SAMRS ga - enye gị nkwụsị siri ike ma dị mma karị.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmalite ma dobe abụba na-enweghị steroid n'ihi na anyị niile maara na ndị steroid nwere mmetụta siri ike na njem, ya mere a na-akwado LGD-4033 / VK5211, Ligandrol. Ọ bụ na-egbu egbu na mmetụta dị oke ntakịrị.
(VK5211 ntụ ntụ) LGD-4033 ntụ ntụ, Ligandrol Raw Powder
Maka usoro ka ukwuu (N'ime 1kg)? A ga-ezipụ na 3 ọrụ ụbọchị mgbe ịkwụ ụgwọ.
(VK5211 ntụ ntụ) LGD-4033 ntụ ntụ, Ligandrol ntụ ntụ Marketing
Esi zụta LGD-4033 ntụ ntụ (CAS 1165910-22-4); zụta VK5211 ntụ ntụ; zụta Ligandrol ntụ ntụ si AASraw
AASraw na-enye 98% LGD-4033 / VK5211 dị ọcha, Ligandrol raw ntụ ntụ n'okpuru labs ma ọ bụ bodybuilders maka oral ma ọ bụ ogwu ojiji.
LGD-4033 / VK5211, Ligandrol Powder Powder (CAS 1165910-22-4) Ntuziaka:
Nzọụkwụ na-eduzi ịzụta LGD-4033 ntụ ntụ ntanetị
Gini mere anyi ji azuta LGD-4033 / VK5211 / Ligandrol powder from AASraw?
Chlormadinone acetate (CMA) ntụ ntụ (302-22-7)